Olompirenena very hevitra, manangona sonia hitakiana amin’ireo manampahefana ao Timor-Leste hampitsahatra ny famerenana indray ilay lalàna momba ny fanalàm-baràka · Global Voices teny Malagasy
Isan'ireo nanao sonia ny mpanao gazety, mpitarika fiarahamonim-pirenena, mpianatra, akademisiàna
Voadika ny 22 Desambra 2020 17:03 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Français, Español, English
Hetsi-panoherana iray natao ny 3 Aogositra ho fandavàna ny famerenana ilay lalàna momba ny fanalàm-baràka ao Timor Leste. Sary avy amin'ny pejy Facebook-n'ny Association Journalist Timor Leste (AJTL), nahazoana alalàna ny fampiasana azy.
Ny 25 Aogositra, nisy fanangonan-tsonia natolotra ny Ministery ny Filohan'ny Filankevitry ny Minisitra nitakiana ny hanajanonana ilay tolokevitra hamerenana ilay lalàna famaizana momba ny fanalàm-baràka ao amin'ny firenena.
Fanangonan-tsonia avy amin'ny Movement Against the Criminalization of Defamation and Injury (MKKDI) – Hetsika Manohitra ny Fanaovana ny Fanalàm-baràka sy ny Ompa ho toy ny Heloka Bevava, izay ahitàna ireo solontena avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, ny fikambanan'ny mpanao gazety ao Timor-Leste (AJTL), ny Filankevitry ny Gazety, ireo akademisiana, ary ireo mpianatra amin'ny anjerimanontolo.
Toherin'izy ireo ilay volavolan-dalàna natolotry ny Ministry ny Fitsarana tamin'ny 5 Jona izay mamerina ny maha-heloka bevava ny fanalàm-baràka izay nesorina rehefa nandàny Lalàna Vaovao mifehy ny asa fanaovan-gazety ny governemanta tamin'ny 2014.
VAKIO IHANY KOA : Ao anatin'ny ahiahy ny amin'ny mety ho fiantraikany amin'ny fahalalahana maneho hevitra, fikasaà'i Timor-Leste ny hamerina indray ilay lalàna maha-heloka bevava ny fanalàm-baràka .
Nomarihan'ny MKKDI tao amin'ilay fanangonan-tsonia nataon-dry zareo fa herinandro monja tamin'ny Jona no nakàna ny hevitry ny daholobe momba ilay tolodalàna.
Toy izao ny valinteny azon'ity mpanoratra ity rehefa nandefa imailaka tamin'i Alberico Junior , mpitondra tenin'ny MKKDI izy, mikasika ilay fanangonan-tsonia :
…Heverin'ny hetsika fa io tolodalàna io dia natao hiaro ireo eo amin'ny fitondràna tsy hiharan'ny tsikera rehefa manao kolikoly ry zareo na heloka hafa. Tsy mila ny fampiharana io lalàna io eto amin'ny firenena izahay satria tsy tianay ny hiverina tamin'ny andron'ny fitondrana jadona Indoneziana sy ny fotoanan'ny fanajanahantany Portiogey, vokatry ny fanjanahantany io lalàna io raha ny marina, izay natao hanakanana ireo vahoaka Timore tsy hanakiana ny governemanta tamin'izany fotoana izany.
Zanatanin'i Portiogaly i Timor-Leste nanomboka ny taona 1702 hatramin'ny 1975. Nobodoin'ny Indonizia indray ny tanin'izy ireo ny taona 1975 hatramin'ny 1999.
Taorian'ny nahazoany ny hevitry ny daholobe momba ilay volavolan-dalàna nanao fanambarana ny Ministry ny Fitsarana, ny 19 Jolay, fa nesoriny ireo andalana mampitombo ny sazy ho avo roa na telo heny ho an'ireo voaheloka ho nanàla baraka mpiasam-panjakana iray na namoaka izany teny amin'ny filazambaovao, isan'izany ny tambajotra sosialy. Ho valin'ny kiana avy amin'ny maro hoe afaka ampiasaina hanohintohinana ny fahalalahana miteny no antony nanesorana ilay andininy.
Kanefa nilaza ny Federasiona Iraisampirenan'ny Mpanao Gazety (IFJ) hoe diso io fanambaràna io satria mbola tsy nisy niova ilay lalàna mifehy ny fanalàm-baràka. Nanoratra toy izao i Jim Nolan, izay mpanolotsaina momba ny lalàna sady mpomba an'i Bono ao amin'ny IFJ Azia-Pasifika :
Rehefa nohalalinina, ny hany ‘marimaritra iraisana’ natolotry ny Ministry ny Fitsarana, dia ny tsy fisian'ny marimaritra iraisana mihitsy. Ny fanarontsaronana mikaviavia ireo fanakianana marim-pototra sady matotra nataon'ny fiarahamonim-pirenena no hany vitany. Nijanona ho tsy nahitana valiny tao tao anatin'ity tolodalàna ity ny votoatin'ireo tsikera ireo.
Jonas Guterres, mpanolotsaina fahiny tao amin'ny Biraon'ny kaomisiona miady amin'ny kolikoly ao Timor-Leste no nampitandrina ny amin'ny mety ho fiantraikan'ilay volavolan-dalàna amin'ny ady amin'ny kolikoly :
…mifanohitra amin'ny tombontsoam-pirenena ny hetsiky ny governemanta ao Timor-Leste hanameloka ny fanalàm-baràka, ary mety hanimba ny ezaka hifehezana ny kolikoly, amin'ny alàlan'ny fanafoanana tsikelikely ny feon'ireo mpitoroka sy ireo filazambaovao.
Mifanohitra amin'izany aza, ilaina ny fanamafisana bebe kokoa ny ezaka iadiana amin'ny kolikoly, amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fiarovana ireo mpitoroka sy ireo dingana fanonerana ny fanànana.
Ny 3 Aogositra, nanantanteraka hetsi-panoherana iray nanameloka ilay volavolan-dalàna ireo mpanao gazety.
11 Aogositra, nihaona tamin'i Francisco Guterres, filohan'ny Timor-Leste, ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena La'o Hamutuk. Nandritra ny fihaonana dia nolazainy fa aleony manabe toy izay hatao ho heloka bevava izany, hoy izy amin'ny fiatrehana ilay resaka fanalàm-baràka. Nampiany koa fa tsy laharam-pahamehana ho an'ny governemanta io volavolan-dalàna io.
Naato tamin'ny asany ny parlemantan'i Timor-Leste ary amin'ny herinandro faharoan'ny volana septambra no hanohy ireo fotoam-pivoriany.